DigiTimes: iPad Pro misy efijery mini-LED dia tsy ho tonga alohan'ny Aprily | Vaovao IPhone
DigiTimes: Tsy handefa ny iPad miaraka amin'ny efijery Mini-LED mandra-pahatongan'ny aprily farafaharatsiny
Betsaka ny tsaho tonga tao aminay tato anatin'ny herinandro vitsivitsy ny amin'ny mety hanombohana ny iPad Pro 12,9-inch miaraka amina efijery Mini-LED vaovao. Izy io koa dia nanondro ny iPad Mini azo atao miaraka amin'ny volavolan'ny zokiny lahy, mampihena ny frame sy ny fitomboan'ny efijery. Ankehitriny, ny zava-drehetra dia toa manondro an'ity karazana efijery ity, mini-LED, tsy hahita ny jiro amin'ny fitaovana Apple vaovao raha tsy amin'ity telovolana faharoa 2021 ity, izay manomboka ny 1 aprily ho avy.
Araka ny DigiTimes sy loharanom-pahalalana mifandraika amin'izany, Tsy tokony hiandry ity fitaovana vaovao ity isika hatramin'ny faran'ny volana martsa indrindra.. Araka ny fanontana farany navoakany (amin'ny alàlan'ny MacRumors):
Epistar no hany mpamatsy chip mini-LED ampiasaina amin'ny iPad Pro 12,9-inch miaraka amin'ny efijery mini-LED miaraka amin'ny 50% ny fahafaha-mamokatra natokana ho an'ny takelaka Apple ho avy ary miaraka amin'ireo fandefasana entana kasaina hatao lehibe manomboka ny telovolana faharoa tamin'ny 2021, raha ny loharanom-baovao.
Tamin'ny herinandro lasa dia efa nanondro ny DigiTimes fa ny iPad Pro 12,9-inch vaovao dia azo atomboka amin'ny faran'ny volana martsa na amin'ny fiandohan'ny telovolana faharoa amin'ny taona. Miova izao ny kabary milaza mazava fa ny fandefasana entana betsaka amin'ny iPad vaovao dia hanomboka amin'ny telovolana faharoa.
Etsy ankilany, tamin'ny herinandro lasa dia efa notaterina ny tombantombana vaovao fa i Apple dia hitazona ny hetsika martsa andrasana amin'ny talata 23 aogositra. Amin'ity hetsika ity, izay mbola tsy voamarina, Vina vaovao no andrasana hampidirina toy ny AirTags nandrasana hatry ny ela, ny AirPods 3 vaovao (Avelanay anao ny lahatsoratra etsy ambany, izay efa ilazanay aminao ny vaovao rehetra momba izay fantatra momba azy ireo eto) ary ireo maodely iPad Pro vaovao. Araka ireo famoahana DigiTimes vaovao ireo ary mandray azy ireo ho marina, na eo aza ny fampisehoana azy, ny iPad Pro misy efijery mini-LED dia tsy halefa raha tsy amin'ny daty manaraka.
Apple dia manana vokatra samihafa amin'ny lalan-kivoahany amin'ny alàlan'ny teknolojia Mini-LED ary tsy ho gaga izahay raha lasa fenitra ho an'ny fitaovanao izany. Ampahatsiahivo fotsiny anao ny fahasamihafana misy amin'ny efijery LCD mahazatra, izay ahitan'ny mini-LED fanazavana bebe kokoa ary koa ny fifanoherana lehibe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » DigiTimes: Tsy handefa ny iPad miaraka amin'ny efijery Mini-LED mandra-pahatongan'ny aprily farafaharatsiny
Ny dokam-barotra rehetra dia tsara ho an'ny Apple na TikTok aza
Gurman: iPad Pro miaraka amin'ny efijery miniLED dia ho tonga amin'ny volana aprily